I-OPPO K3 ivuza ngokupheleleyo: uyilo kunye neempawu ziveziwe I-Androidsis
UNerea Pereira | | IsiTshayina Android
Kancinci kancinci siya sazi ngomsebenzi olandelayo womenzi waseAsia. Ewe, Ayiloxesha lokuqala ukuba sithethe nge-OPPO K3, kwaye ngoku sinokuqinisekisa uyilo lwayo kunye nazo zonke iinkcukacha eziya kuba nale fowuni. Hayi I-OPPO izoyikiso zayo kubasebenzi zokungavuzi ulwazi Akuncedi nto kuye.
Kwaye yile, ngeli xesha ibingengabo abasebenzi benkampani abacocileyo bobabini uyilo kunye ne Iimpawu zobuchwephesha ze-OPPO K3. Ibiyivenkile yaseTshayina iJD.com epapashe isiphelo sendlela ngempazamo, ibonisa zonke iimfihlo zayo.
1 Iscreen se-6.5-intshi kunye netekhnoloji ye-AMOLED kunye nesisombululo se-FullHD +
2 Ezi ziya kuba zezinye zeempawu ze-OPPO K3
Iscreen se-6.5-intshi kunye netekhnoloji ye-AMOLED kunye nesisombululo se-FullHD +
Ngokwendlela yoyilo, sifumana imodeli ene- ukufana okukhulu kwi-OnePlus 7 Pro. Into onokuyilindela ukuba sijonga ukuba zombini ezi nkampani zikwiqela elinye lamaTshayina. Kugqityiwe ngesinyithi nakwiglasi enomsindo ukunika i-OPPO K3 uyilo olugqibeleleyo, ifowuni entsha ineenkcukacha ezinomdla kakhulu.
Siza kuqala ngokuthetha ngaphambili, apho isikrini esikhulu esine-intshi ye-6.5 ye-intshi yeyona nto iphambili, siphepha inotshi esophula i-aesthetics yayo nayiphi na i-terminal, ukubheja kwikhamera ebuyisekayo phezulu. Oku sele kukhankanyiwe, kulandelwa olona hlobo luvithamini lweefowuni ezintsha ze-OnePlus.
Kwaye akunjalo, asinaso isiko lokufunda ngomnwe ngokwesiko nokuba ngaphambili okanye ngasemva: the Isikrini se-Oppo K3 Iya kubandakanya inzwa yesithandathu ye-biometric sensor edityaniswe kwipaneli yayo, ukubonelela ngesantya sokufunda iminwe yethu ngokukhawuleza kunakwinguqulelo zangaphambili.
Ke, ngokwewebhu, kubonakala ngathi i-OPPO iyakulandela umgca wokuyila ofanayo kwi-OPPO K3 yayo apho isikrini siyakuba ngumdlali ophambili, Iphaneli ye-AMOLED ye-6,5-intshi ngesisombululo seepikseli ezingama-2.340 x 1.080. Iphaneli ixhotyiswe ngemisebenzi yokufiphaza kunye nokukhusela iliso ukulungiselela ukusetyenziswa okuqhubekayo ngaphandle kokuphazamisa umbono wakho.
Ezi ziya kuba zezinye zeempawu ze-OPPO K3
Kwaye lumka, ukuba umphandle wayo ubukeka ulunge ngokwenyani, izixhobo zekhompyutha eziza kunyusa ifowuni ye-middle-range elandelayo kwi-Shenzhen-based firm ibukeka ilungile. Ukuqala, sifumana isikrini esenziwe yi Iphaneli ye-AMOLED ye-6.5-intshi eya kuthi ifikelele kwisisombululo sama-pixels angama-2.340 x 1.080 enkosi kwifomathi yayo yomhlaba.
Ukongeza, esi sikrini siya kuba nefilitha yokukhusela amehlo ethu, kunye nemowudi yokunciphisa ukuze, emva kokusebenzisa ixesha elide, singabinangxaki yombono. Kwaye iprosesa yakho? I-Oppo K3 iya kubetha ngesinye sezona zisombululo zixhaphakileyo zeQualcomm phakathi kuluhlu oluphakathi. Sithetha ngomqhubekekisi I-Snpadragon 710 ezingundoqo ezisibhozo, zixhaswe ziinguqulelo ezimbini ezine-6 ​​okanye i-8 GB ye-RAM, kunye ne-64 kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Asazi ukuba iyakwandiswa ngokusebenzisa ikhadi le-microSD, kodwa kubonakala ngathi kungaphezulu kokumiselwa kwe-solvent.
Ukuxhasa bonke ubunzima behardware, ndinganyusa ibhetri ye-3,765 mAh ngenkampani yeVOOC 3.0 yokuhlawulisa ngokukhawuleza, ukubonelela ngokuzimela okugqwesileyo, kunye nesantya esikhulu sokutshaja. Kwaye, kungenziwa njani ngesixhobo sakutshanje, i-Oppo K3 iza kufika nge-Android 9 Pie, ukongeza kuzo zonke iindlela zonxibelelwano eziyimfuneko: Uhlobo lwe-USB C, iSIM slot, inkxaso ye-4G LTE, iWiFi kunye neBluetooth 5.0.
Ikhamera ye-Oppo K3? Ewe, ukuqala, sinenkqubo yeelensi ezimbini ngasemva ngenzwa yokuqala ye-16-megapixel, exhaswa yisixhobo sesibini se-2-megapixel sensor ejongene nokubamba ubunzulu bemifanekiso ukufezekisa i-bokeh enkulu okanye isiphumo esingagungqiyo. Kule nto kufuneka songeze isibane se-LED esiya kuthi sidibanise isixhobo, esiya kuthi sibe netekhnoloji ye-Ultra Clear Night View 2.0, njenge-OPPO Reno, ukuze iifoto ezithathwe nge-Oppo K3 zilunge ngokwenene.
Okokugqibela, kulindeleke ukuba inyuse ikhamera ye-megapixel eyi-16 ngaphambili kunye netekhnoloji ebuyisekayo ukubonelela ngoyilo olugqwesileyo, kunye nokonwabisa abathandi be-selfie. Ifumaneka ngemibala emithathu, iNebula Purple, uMhlophe wasekuseni kunye noMfihlo oMnyama, ukuvuza kubonisa ukuba eyona modeli isisiseko iya kubiza 260 euro ukutshintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » I-OPPO K3 ivuza ngokupheleleyo: uyilo kunye neempawu ziveziwe